Memory Foam uye Pocket Spring Mattress
Isu tinonyatsoteerera kune zvinodiwa nevatengi uye tirambe tarisisa vashandisi 'ruzivo mupfungwa kana zvichikura ndangariro foam uye muhomwe chitubu chematani. Mhando-yakavimbiswa zvinhu zvishandiso zvinogamuchirwa kuti uve nechokwadi chechigadzirwa mhando uye kuita kwayo kwakanyanya kunyanya kusanganisira Rayson. Mukuwedzera, ine chitarisiko chakagadzirirwa kutungamira iyo maindasitiri maitiro.
Nekurangarira kwakazara kweSpam uye muhomwe chitubu chematanho ekugadzira mitezo Muzvikamu zvese zvese, nyanzvi dzeQC dzinotarisa maitiro ega ega kuti uve nechokwadi chechigadzirwa mhando. Uyezve, kutakura kwedu kwakajairika uye kunogona kuita zvinodiwa nemumwe mutengi wese. Isu tinovimbisa kuti zvigadzirwa zvinotumirwa kune vatengi zvakachengeteka uye kurira. Kana iwe uine chero mibvunzo kana kuda kuziva zvakawanda nezve yako memory foam uye muhomwe chitubu mattress, tidza isu zvakananga.
Nhasi izuva rakanaka kuti Rayson akaronga kuunza chigadzirwa chedu chitsva kune veruzhinji. Iyo ine zita remutemo rinonzi ndangariro